Maxay yihiin siyaabaha dib loogu soo celiyo 2019?
Codsiyada Link waa mid ka mid ah siyaabaha ugu caansan ee lagu heli karo juice link for domain iyo horumarinta darajooyinka bogga. Iyada oo la adeegsanayo codsiyada xiriirka, waxaad dhisi kartaa isku-xirayaasha dibadda adigoo isticmaalaya waxyaabaha hadda ku jira boggaaga. Backlinking waa hab aad u wanaagsan oo lagu dhisayo calaamaddaada iyo wanaajinta wacyiga. Dhibaatada kaliya ayaa ah in mulkiilayaasha badan oo websaydku leeyihiin hab khaldan oo lagu xidhi karo dhismaha. Waxay iloobaan inay ku jiraan boggag kale oo aan ahayn iyaga u gaar ah, iyaga u habaynaya iyo sababta ay taasi uga faa'iideysan doonto milkiilaha bogga.
Qodobkan, waxaad ka heli doontaa siyaabo dhowr ah sida loo isticmaalo codsiyada xiriirka si loo wanaajiyo ololahaaga dhismaha xiriiriyaha. Waxaa jira noocyo badan oo ah noocyo kale oo isku xiran oo la xidhiidha dib u eegis aan ka ahayn kuwa aad ka heli doonto maqaalkan.
Sidee dib loogu helaa dib u eegista 2019?
Qodobada ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay in aad tixgeliso waa markaad gaareyso website-ka; waxaad ubaahan tahay in aad u habeysid emailka si aad ula xiriirto goobta. Xaqiiji in email-yadaada ay yihiin kuwo gaar ah oo ay ku jiraan macluumaadka aadka u qiimeeya akhristaha. Waxaad u baahan tahay inaad si gaar ah ugu sameyso mawduuc website-ka ah oo muujiya lamaanahaaga ganacsiga ee aad ka qayb qaadatay content-ka kaas oo ku yaal ilaha webka. Waxyaabaha dhowr daqiiqadood ee dheeraadka ah ee ay qaadato waxay sameyn kartaa farqi weyn oo ku yimaada jawaabaha iyo bogagga shabakadaha ee u badan inay ku siin doonaan jawaab togan oo ku saabsan codsigaaga. Waxaad u baahan tahay inaad macluumaadkan maskaxda ku hayso wakhti kasta oo aad isku daydid inaad xiriir ganacsi la sameysatid milkiilaha bogga.
Codso tixraaca isku xirka
Habka tooska ah ee loo dhisi karo xidhiidhada domainkaaga waa codsi toos ah. Si kastaba ha noqotee, habkani sidoo kale wuu ka yar yahay kuwa kale. Waxay qaadataa dhowr daqiiqo si aad ula xiriirto webmaster oo weydiiso dhabarka. Natiijada sida arrintu u socoto way ka duwanaan kartaa tayada ilaha aad doonayso inaad la shaqayso. Shabakadaha maamulka ee caan ku ah waxay u badan tahay inayan aqbali doonin hindisahaaga sababtoo ah waxay leeyihiin xulasho adag oo ah ilaha webka kuwaas oo soo bandhigi kara boggooda.
Raadinta arimaha dhibaatooyinka bogagga hadda jira
Hab kale oo caqli gal ah oo aad ku heli kartid tageerada tayada ee boggagaaga waa in lagu dhajiyo ilo web xallinta iyaga. Macluumaadkani wuxuu qiime u yeelan karaa mulkiilaha boggiisa sida aad uga caawineyso xalinta arrimaha aysan xitaa ogeyn. Haddii aad isticmaalayso noocan ah codsiga xiriirka, hubi inaad u soo gudbiso webmaster leh xogtan si bilaash ah. Waa caqli badan tahay in la sugo ilaa xiriirka emailka labaad ama saddexaad ka hor inta aan la sameyn codsiga gadaal.
Isticmaalka maadadaada sida ilaha aad ka heshay mawduuca aad ka heshay
Habkan dib u helid dib u noqon kara faa'iidada boggaaga. Haddii aad tixraacayso milkiilaha blogka oo faallo ka bixisa maqaalka ama boostada aad rabto gadaal, waa mawduuc aad u fiican. Habka kale ee dib loogu soo celiyo waa inuu sheego boostada aad ku aragtay, ka dibna soo qaado boostada aad rabto xiriirka. Waxaad u baahan tahay inaad akhrido maqaalo oo aad aragto meelaha ay calaamaddaadu tahay mid macquul ah oo muuqaal caadi ah. Haddii aysan hadda lahayn xiriir, ka dibna soo jeedi in website-kaaga uu noqon karo ilo wanaagsan oo isku xiran Source .